🥇 Fandaharana ho an'ny klioban'ny fanatanjahan-tena
Rating: 4.9. Isan'ny fikambanana: 903
Fandaharana ho an'ny klioban'ny fanatanjahan-tena
Lahatsary fandaharana ho an'ny klioban'ny fanatanjahan-tena
Manafatra programa ho an'ny klioban'ny fanatanjahan-tena
Ny fanamorana sy fanamorana ny asa mandeha ho azy amin'ny klioban'ny fanatanjahan-tena no lakilen'ny fahombiazan'ny orinasanao. Ny programa momba ny klioban'ny Fitness dia mamela anao hahatratra an'ity fahombiazana sy fanamorana ny kaonty ity. Ny interface multiuser an'ny programa fitantanam-bola amin'ny klioban'ny fanatanjahan-tena dia ahafahan'ny manampahaizana manokana amin'ny ivon-toerana ara-panatanjahanao miasa mora sy mifehy ny asany, na samy mpitantana na mpanazatra, ary koa miatrika ny kaontin'ny klioban'ny fanatanjahan-tena. Ny fahaizan'ny fandaharan'asa mandeha ho azy klioban'ny fananganana filaminana sy ny famakafakan'ny mpanjifa dia mamela anao manampy mpanjifa vaovao amin'ny tsindry iray amin'ny totozy na manamarina raha misy fifanarahana noforonina teo aloha, ary mifehy ny fizotrany rehetra. Amin'ny alàlan'ny fitantanana araka ny tokony ho izy ny klioban'ny fanatanjahan-tena sy ny mandeha ho azy dia afaka mahomby amin'ny raharaham-barotra ianao. Ny programa fitantanana automatique ny fanaraha-maso ny trano fitehirizana sy ny fanaraha-maso fitaovana izay mandamina ny kaonty ao amin'ny klioban'ny Fitness dia ahafahanao mitazona ny firaketana ny fandoavam-bola, mijery ny angona momba ny trosa, na sehatra hafa. Amin'ny alàlan'ny fandaharan'asan'ny kliobanay ara-panatanjahan-tena dia azonao atao ny mandamina ny angon-drakitra momba ny vondrona, ny fotoana - manampy anao hikajiana tsara ny asa ao an-toerana, ny fandaharam-potoanan'ny manam-pahaizana ary koa ny fanisana ny karama sy ny fitantanana mpiasa ny klioban'ny Fitness.
Ny programa fitantanana klioban'ny Fitness Fitness dia ny fananganana tatitra sy ny fanaraha-maso ny antsipirihany dia mpanampy lehibe amin'ny kaontinao. Ny fitantanana ny klioban'ny fanatanjahan-tena dia tsy maintsy mandeha ho azy. Noho izany antony izany dia afaka manolo-tena izahay hanao fandaharam-pampiofanana izay manampy amin'ny asa miaraka amin'ny mpanjifa ary hitazona kaonty ao amin'ny klioban'ny Fitness. Mba hahamora ny asa dia azonao atao ny mampiasa karatra manokana misy kaody bara, izay ahafahan'ny programa ataonay ho an'ny klioban'ny fiasa miasa. Manamora ny fanarahana ny mpanjifa izany, izay manampy amin'ny fitazomana ny antontan-taratasim-bola momba ny fandoavam-bola. Alao an-tsaina fotsiny ny hakana aina sy fanavaozana an'ity programa ity! Azonao atao ny misintona maimaimpoana ny programa kliobantsika ho toy ny kinova fampisehoana. Ny programa dia afaka manome ny jiro maitso ho an'ny fikolokoloana kliobanao! Manampy anao amin'ny fitantanana mora ny hetsika ataonao izany, araho ny volanao!
Ny fanadihadiana dia manomboka hatrany amin'ny mpanjifanao. Ny mpanjifa no loharanon'ny fiadananao. Arakaraka ny itiavanao azy ireo no mahamarika fa mitsidika gym ianao ary mitondra vola bebe kokoa. Ny zava-misy fa mivoatra tsara ny ivon-toeranao dia aseho amin'ny tatitra manokana momba ny fitomboan'ny tobin'ny mpanjifa izay ateraky ny programa fitantanana kaonty momba ny famokarana tatitra sy ny fanaraha-maso ny mpiasa. Raha lavitra lavitra ny fitomboana dia diniho ny tatitra momba ny varotra. Mampiseho ny fomba hahitan'ny mpanjifanao matetika momba anao. Aza mandany vola amin'ny fomba fanaovana dokambarotra tsy mahomby. Ankoatra ny fisarihana mpanjifa vaovao dia aza very ireo taloha.
Ny tatitra manokana momba ny hetsiky ny mpanjifa dia mampiseho ny fampiasan'ny mpanjifa ny serivisinao. Afaka mahita ny isan'ny mpanjifa tsy manam-paharoa ianao mandritra ny vanim-potoana ankehitriny sy taloha. Raha mahay mandanjalanja tsara ny asa ataonao dia ho hitanao ao amin'ny tatitra manokana hoe andro sy ora inona no tampon'ny ora fitsidihana. Raha te hahalala ny fahefa-mividiana ankehitriny miaraka amin'ny fanampian'ny programa dia hahafahanao mamorona tatitra "Salanisa Salanisa". Saingy amin'ny mpanjifa rehetra, misy ireo misongadina, vonona ny handany bebe kokoa, nefa koa mila fiheverana manokana. Afaka mahita mpanjifa mampanantena toy izany mora foana ianao amin'ny famoronana tatitra "Rating". Eo an-tampon'ny naoty dia ireo izay nandany ny ankamaroany teo afovoanao, ary ny fihenan'ny isa dia aseho ireo mpanjifa tsy dia mahaliana. Ho fanampin'izay, ianao dia afaka mamorona rejisitry ny mpitrosa ao amin'ilay programa, raha ilaina izany. Tena mety izany. Izay rehetra mbola tsy nandoa ny saram-pianarana dia hangonina amin'ny toerana iray. Raha manana tamba-jotra ianao, dia ho afaka hamakafaka na amin'ny sampana na amin'ny tanàna. Avy aiza marina no ahazoanao ny karama betsaka indrindra?
Mihamafy hatrany ny fifaninanana eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena. Fa ny fangatahana ireo karazana serivisy ireo dia mitombo ihany koa, satria ny olona maniry hatrany ny ho tonga mahia sy fanatanjahan-tena. Ireo no fironana maoderina. Mba hivelomana amin'ny tontolo mifaninana toy izany dia ilaina ny manavao tsy tapaka ny orinasanao ara-panatanjahantena, manaraka ny fanavaozana amin'ny haitao maoderina ary manandrana mampihatra azy ireo alohan'ny ataon'ny mpifaninana aminao. Ny fandaharanay dia safidy lehibe ho an'ireo izay te-hanatsara ny orinasany ary hanome ny mpanjifa ny serivisy faran'izay avo lenta ihany. Ny programa USU-Soft dia mpanampy maoderina amin'ny fandaminana ny filaminana amin'ny orinasanao!
Misy asa mahaliana be dia be, izay ahafahan'ny tsirairay misafidy izay mifanaraka aminy tsara indrindra. Misy vets, mpamily, mpanamory sambondanitra, mpanety volo sns. Na izany aza, misy asa iray miavaka ary malaza ankehitriny. Tianay ny manasongadina fa takiana ny mpampiofana anio, satria mihamaro ny olona te ho salama sy tsara bika. Izany dia mitarika amin'ny zava-misy fa misy klioba fanatanjahan-tena bebe kokoa izay manome serivisy fanatanjahantena. Araka izany dia hitantsika ny fitomboan'ny isan'ny olona maniry ho tonga mpanazatra. Na izany aza, mba hahatonga ny kliobanao fanatanjahan-tena ho tsara indrindra dia mila mpampiofana matihanina indrindra ianao. Mampalahelo fa sarotra ny mahatakatra sy manombatombana mpiasa mety hatao mandritra ny tafa sy dinika. Soa ihany, misy fomba iray anaovana azy amin'ny programa USU-Soft, izay manadihady ny fahombiazan'ny mpiasa mifototra amin'ny masontsivana marobe. Ny fepetra lehibe indrindra dia ny habetsaky ny asa vita, ary koa ny hevitra avy amin'ny mpanjifa sy ny naoty ao amin'ny lisitry ny mpiasa tsara indrindra.